Ammaanka fog, ka fogow Android-kaaga haddii ay dhacdo khasaare ama tuugo | Androidsis
Yimaado a app android Suuqa loogu talagalay inuu naga caawiyo, helitaanka iyo meel fog laga maamulo talefankeena Android haddii ay dhacdo khasaare, meelayn ama tuugo, waxay ku saabsan tahay Amniga Fog. Terminal-yada cusub ee leh shaashado waaweyn iyo qeexitaankooda cajiibka ah ee suuqa soo galaya ayaa ah sheegasho wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel shisheeyaha iyo in la isku dayo in la xakameeyo intii suurtagal ah tani waxay dhalatay codsiga aan maanta ka hadli doono.
Amniga Fog kaas oo boggiisa rasmiga ah waa tan waa Application noo sahlaya in aan meel fog ka maamulno Terminalkeena waxaanan ka codsan karnaa in talefanka uu noogu soo diro fariin ciwaanka uu ku yaalo,kadhawaaqa alaarmiga tuuganimada ama ka soo waci kara terminalka la xaday lambarka aan horay u siinay. Midda kale haddii qofka naga xado terminalka uu dhigto sim-kaarka, waxaa naloo heli doonaa macluumaadka ku saabsan lambarka teleefoonka uu leeyahay simkaarkaas, dabcan waa la xannibayaa si aan loo isticmaalin. Sida aad arki karto, waxaa jira fursado badan oo aad u soo jiidasho leh oo Nabadgelyada Fog ay na siiso.
Hawlgalkeedu waa sahlan yahay, oo leh interface nadiif ah oo qurux badan halkaas oo si fudud loo siinayo erayga sirta ah iyo lambarka taleefoonka ogeysiisyada mustaqbalka aan ku samayn doono codsiga. Si kastaba ha noqotee, boggeeda rasmiga ah ama adeegsiga caawimaad taxaddar leh oo ay bixiso isla codsi isku mid ah, wax dhib ah kalama kulmi doono marka la isticmaalayo.
Haddii nasiib xumo waa inaan ka faa'iideysanaa Amniga Fog Kaliya in aan dirno SMS leh koodka talefankeena waxaan ka faa'iideysan karnaa dhammaan xulashooyinka barnaamijka, in aan xirno taleefanka, samaynta dhawaaqa alaarmiga, uga digno qofka terminalka leh waqtigaas inuu soo celiyo, helitaanka goobta. Terminalka ama teleefan kaa lumay na soo wac.
Codsigu wuxuu ku jiraa Suuqa Android oo qiimihiisu yahay € 0,9, wax yar oo ah fursadaha iyo faa'iidooyinka ay noo keeni karto.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan abka Android Security Remote
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Amniga fog, si fog u xakameyso Android-kaaga haddii ay dhacdo lumis ama xatooyo
Kaliya waan rakibay, runtuna waxay tahay in ay tahay mid raaxo leh. Mahadsanid!
Ka jawaab dabka
Waa maxay waxyaalihii hore ee ay qabato. Waxaan filayaa inay u qalmaan 90 senti.
Ka jawaab p1p0
la caddeeyey waa toban
Muhiimadu waxay u socotaa qumman
Hi, Ma soo dejisan karo apps-ka: Ma qof baa ii soo gudbin kara?
suuqa kuma soo baxo
Ku jawaab maxii
Tani miyay ka fiican tahay WaveSecure?
Jawaab Yeradis P. Barbosa Marrero
Badbaadada hirarka ayaa ka wanaagsan. Laakiin taasi waxay u baahan tahay rukhsad sannad kasta.
Taa beddelkeeda waxay ku samaynaysaa wax isku mid ah wax ka yar hal euro.
Waan isku dayay oo waan hayaa. Waxaan sameeyay dhowr imtixaan waana mid raaxo leh. Waxay u baahan tahay in xoogaa la turxaan bixiyo laakiin ma xuma haba yaraatee. Waxaan ku talinayaa.
U jawaab damia
La yaab leh, waxaan sugayaa rabitaankayga iyo nus saac ka hor waxaan ka fekerayay inay fiicnaan lahayd in la helo barnaamij calaamadeynaya booska mobile-ka gps haddii ay dhacdo xatooyo. Waxaan ahay barnaamij-sameeyaha, waxaanan ka fikirayay, si ka baxsan suurtogalnimadayda, inaan horumariyo wax noocaas oo kale ah, inkasta oo aan shaki ka qabo inaan awood u leeyahay. Waxaan ka fekerayay suurtagalnimada in mar hore la allifay iyo voila! Waa maxay yaab aan hadda naftayda siiyay. Jeclahay! Isla markii uu mobilku yimaado waan rakibaa
U jawaab chs
Ma soo dejisan karo, kama soo muuqato suuqa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in qof yaqaan hab kale oo loo soo dejiyo
Maxaa dhacaya haddii marka telefoonkaaga la xado, ka hor inta aadan xannibin ama wax kasta, ay uninstall arjiga?
Su'aal aad u wanaagsan.
Marka ay sidaas tahay, maxaa loo rakibaa wax laga saari karo? Haddii la xado, u carralo leh 90 senti iyo telefoonka. laba tuug oo midi qiimaheedu yahay.
Waxaan u maleynayaa inay fiicnaan lahayd in la hirgeliyo koodka amniga barnaamijka si loo awoodo in la furo.
U jawaab Xoxé
Ma jirtaa hab lagu iibsado laakiin lagu soo dejiyo kombuyuutarkayga ka dibna ugu wareejinta Android-kayga? waa in aysan ka muuqan AndroidMarket
Ka jawaab rigel
Aan aragno, code-kaas oo qaab labajibaaran kor ku yaal waa isku xirka si toos ah loogu soo dejiyo mobilka, kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto barcode reader-ka oo bilaash ah oo Suuqa ku jira, barnaamijka yar waxaa loo yaqaan 'Barcode scanner' , Waa la fuliyay, waxa ay diiradda saaraysaa camera on code iyo shaashad u muuqataa saddex doorasho, «Open browser» «Share by email» iyo «Share by SMS», iska indha, kuwaas oo aan ku jirin Marquet ah, laakiin , waxaan sidoo kale leenahay xiriiriyaha ciwaanka webka, kani waa "http://bubiloop.com/download/vierco.com.securemote" waa haa, oo si cajiib ah Suuqa dhexdiisa, ka dibna kaliya waa inaad soo dejiso, bixisid oo aado.
FIIRO GAAR AH: Waxaa laga yaabaa inaysan soo bixin markii ugu horeysay, waxay ii shaqeysay markii seddexaad, laakiin mar hore ayaan heystaa, cajiib ah….
Olé waxtar aad u wanaagsan, waan ka helay.
Aan aragno!! Waxaan mar labaad waydiiyaa, ma jirtaa qaab aan ku soo dejiyo pc-kayga oo halkaas uga sii gudbiyo teleefankayga si aan ugu rakibo, sababtoo ah halkan Mexico wali ma lihin helitaanka suuqa Android ee lacagta ah, code-ka QR ayaa ii sheegaya taas. lagama heli karo Suuqa taas darteed ma heli karno codsi kasta oo lacag ah. Ma jirtaa hab lagu bixiyo kaarka deynta ama shay awood u leh in lagu soo dejiyo PC?
Waan ka xumahay laakiin maya
Waa inaad aragto haddii abka uu ka jiro suuqyo kale oo leh ikhtiyaar lacag-bixineed caalami ah sida http://slideme.org/ iyo kuwa kale ee jira, Androidsis waxaad ka heleysaa maqaal ka mid ah suuqyada kale ee jira
Haddii kale, ikhtiyaar kale ayaa noqon doonta inaad la xiriirto horumariyaha oo aad ku bixiso paypal, moneybookers ama nidaam kasta oo kale.
Ka hel marin xidid Xperia Z10 iyo Xperia X10 Mini adigoo gujinaya hal guji